Uxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye nokuthintela - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Iindaba Imfundo Yezempilo, Impilo Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Cinezela Inkampani Imidlalo Ekuhlaleni Impilo-Ntle Uluntu, Impilo Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Iindaba Ukuzonwabisa Imfundo Yezempilo Imidlalo Enzima
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Ungazilolonga njani ngokukhuselekileyo ngoxinzelelo lwegazi oluphezulu
Ungazilolonga njani ngokukhuselekileyo ngoxinzelelo lwegazi oluphezulu
Umsebenzi weMpilo yezeMfundo Rx
Ukuzilolonga kubalulekile kwimpilo yethu iyonke. NgoDisemba ophelileyo, ubunokuba sele ukulungele ukuthetha okuhle ngo-2020, kwaye usenokuba usete iinjongo zempilo kunye nokuzilolonga ngonyaka ka-2021. Kodwa uza kuthini ukuba unoxinzelelo oluphezulu lwegazi? Ngaba uxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye nokuzilolonga kudibanisa ngokukhuselekileyo? Ngaba ezinye iindlela zokuzilolonga zingcono kunezinye, kwaye ngaba amayeza oxinzelelo lwegazi ayaphazamisana nokuzilolonga?
Ngaba kukhuselekile ukwenza umthambo ngoxinzelelo oluphezulu lwegazi?
Ukuzivocavoca umzimba kudlala indima ebalulekileyo ekuthinteleni nasekulawuleni uxinzelelo lwegazi. Uphando oluvela kwi Umbutho wentliziyo yaseMelika bafumanise ukuba abantu abasebenza iiyure ezine (okanye nangaphezulu!) ngeveki babengaphantsi nge-19% yokuba noxinzelelo lwegazi kunabantu ababengasebenzi. Kodwa, kukho izinto ezithile eziqwalaselweyo ukuba sele unamanani aphakamileyo.
Uxinzelelo lwexinzelelo lokuzivocavoca
Ukuzivocavoca uxinzelelo lwegazi kwenzeka xa uxinzelelo lwegazi luphakama ngokungaqhelekanga ngexesha lokuzilolonga, ngokwe U-Anne Doroba, MD , ugqirha womzimba eOrland Park, eIllinois. Uxinzelelo lwegazi oluqhelekileyo lomntu omdala lungaphantsi kwe-120 systolic (inani eliphezulu) kunye ne-diastolic engaphantsi kwama-80 (inani elisezantsi).
Ukuzilolonga ngokwendalo kubangela ukunyuka koxinzelelo lwegazi, kodwa uGqirha Doroba uthi uxinzelelo lwegazi lwenzeka xa uxinzelelo lwegazi lufikelela ngaphezulu kwe-210 systolic emadodeni, ngaphezulu kwe-190 systolic kwabasetyhini, nangaphezulu kwe-110 diastolic kubo bobabini abesilisa. Ingumngcipheko isigxina, uxinzelelo oluphezulu lwegazi naxa uphumle.
Abo banesifo soxinzelelo lwegazi kufuneka bazi ukuba kunjalo uxinzelelo lwegazi amayeza inokuphazamisa umthambo. Uninzi, ukuba alukho uninzi, ii-antihypertensives ziya kuba nefuthe ekuphenduleni koxinzelelo lwegazi kunye / okanye kwentliziyo, utshilo uGqirha Doroba. Ibhlokhi yeBeta Ingabangela ukubetha kwentliziyo kancinci ukuze ungafikeleli kwinqanaba lentliziyo. I-diuretics kunye I-ACE inhibitors kunokubangela uxinzelelo lwegazi olusemva kokusebenza.
Ukwenza umthambo we-aerobic, licebo elihle ukuqala ngeeseshini zokuzilolonga ezifutshane kubunzima obunomceli mngeni kodwa obungenakoyikisa, kwaye ngokuthe ngcembe wakhela ekusebenzeni imizuzu engama-30 ngosuku, iintsuku ezimbalwa ngeveki. Ukuba uthatha i-beta blocker okanye naliphi na elinye iyeza elichaphazela ukubetha kwentliziyo yakho, soloko upholile kancinci njengoko amanye amayeza enokunciphisa ngokukhawuleza uxinzelelo lwegazi ukuba uyeka ngokukhawuleza umthambo.
Ezinxulumene: Yintoni ukubetha kwentliziyo okuqhelekileyo?
Kunye namayeza, izongezo ezithile zibonisiwe ukuba zichaphazela uxinzelelo lwegazi. Izimbiwa ezifunyanwa ngumzimba wethu kukutya okanye kwizongezo ebezikho iboniswe iluncedo kuxinzelelo lwegazi ziquka i-calcium, i-magnesium kunye ne-potassium.
Ezinye izongezo ezidumileyo, nangona kunjalo, zinokuba negalelo kuxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye zinokuba yingozi kwabo bakunyango lwegazi. Ziquka:
Wort eSt ngamanye amaxesha kusetyenziswa ukunyanga uxinzelelo. Izifundo zibonisa ukuba iSt. John's Wort ikhawulezisa imetabolism yamanye amayeza; enokubangela ukuba amayeza oxinzelelo lwegazi aphulukane nokusebenza kwawo.
Ginseng Ngamanye amaxesha isetyenziselwa ukunyusa amanqanaba amandla kwaye ithathwa njengesixhobo sokuzikhusela, kodwa inokubangela ukonyuka koxinzelelo lwegazi.
Ephedra yayikade isisongezo esithandwayo sokulahleka kobunzima, kodwa le mveliso ngoku ivaliwe e-U.S. Kubonakalisiwe ukuba kubangela iingxaki zentliziyo, kubandakanya uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ukubetha, kunye nokuhlaselwa sisifo sentliziyo.
Echinacea isetyenziswa kakhulu ukulwa izifo, ingakumbi umkhuhlane, umkhuhlane. Ikwabonakalisiwe ukuba ichaphazele indlela amayeza enza ngayo umzimba kwaye kufuneka ithintelwe ngabo bathabatha amayeza oxinzelelo lwegazi.
Ezinye izinto ezinobungozi
Kuhlala kungumbono olungileyo ukukhangela ugqirha wakho ngaphambi kokuqala irejimeni yomthambo.Ukuzivocavoca uxinzelelo lwegazi kuyacetyiswa kakhulu ukuba uxinzelelo lwegazi olusisiseko aluphakalanga kakhulu kwaye isigulana asinabungozi obuphezulu njenge-aneurysm yomthambo wegazi, uthi Unyana chandra , MD, uNjingalwazi oNcedisayo Icandelo leCardiology Rush University Medical Center eChicago.
Yeyiphi eyona mithambo ilungileyo yoxinzelelo lwegazi oluphezulu?
Xa kuziwa kuxinzelelo lwegazi kunye nokuzilolonga, umsebenzi we-aerobic uyacetyiswa ukunciphisa uxinzelelo lwegazi, kodwa ukuzolula kunye nokwakha amandla kubalulekile kubalulekile.
Kuxhomekeka kwimeko yomntu ekuqaleni, kodwa umthambo wentliziyo ophakathi kunye nokuphola kancinci komntu ongakhange ahlale phantsi yindawo elungileyo ukuqala, utshilo uGqirha Doroba. Ucebisa ukuhamba kunye nezinto ezinzulu zokubaleka kunye nokuqubha.
Ngokubhekisele kuqeqesho lwamandla, uGqr. Doroba ucebisa ngokuphepha ubunzima obunzima obubangela impendulo yeValsalva (xa ubambe umphefumlo wakho kunye noxinzelelo kubangela ukonyuka koxinzelelo lwegazi). Inkqubo elungeleleneyo-kubandakanya umthambo we-aerobic, uqeqesho lwamandla, kunye nokuzolula-kufuneka ibe yinxalenye yenkqubo yomntu wonke kwaye inokunceda abo banexinzelelo lwegazi baphucule impilo yentliziyo, utshilo. Qalisa nje apho uziva ukhululekile, mhlawumbi umceli mngeni kancinci, kunye nenkqubela phambili.
Abo banexinzelelo oluphezulu akufuneki bakuphephe ukuzilolonga, kodwa kufuneka bazi xa bezingxala kakhulu.Ukuzilolonga rhoqo kunegalelo ekunciphiseni uxinzelelo lwegazi, utshilo uGqirha Chandra. Nangona kunjalo, sicebisa ukuthintela ukuzivocavoca ngamandla ukuba uxinzelelo lwegazi kulindeleke ukuba lukhuphuke ngaphezulu kwe-190 mmHg kwimithambo ephezulu.
Ke, ungazi njani ukuba uzixakekisa kakhulu ngexesha lokuzilolonga? Ezinye zeempawu ekufuneka uzilumkele zibandakanya:
Ukuziva unesiyezi okanye unentloko elula
Ukuzilolonga okungenakuba yeyona nto ilungileyo kwabo banexinzelelo oluphezulu lwegazi kubandakanya nantoni na ebaluleke kakhulu kumaxesha amafutshane njengokuphakamisa ubunzima okanye ukuphalaza.
Ngaba kufuneka usebenzise umthambo ongakanani ukunciphisa uxinzelelo lwegazi?
Utshintsho kwindlela yokuphila lunokuncedauxinzelelo lwegazi olusezantsi Kunye nawo nawaphi na amayeza anokuyalelwa ngugqirha wakho. Olunye uphononongo lufunyenwe nokuba ukunyuka okuthe kratya kokuzilolonga emzimbeni ngaphezu kwamanqanaba okuhlala kungakhokelela ekwehleni okubalulekileyo eklinikhi koxinzelelo lwegazi.
NgokweSebe lezeMpilo kunye neNkonzo zoLuntu , Abantu abadala kufuneka bajonge ukufumana ubuncinci imizuzu eyi-150 (iiyure ezi-2 kunye nemizuzu engama-30) ngeveki yokuqina okuphakathi, okanye imizuzu engama-75 (iyure e-1 kunye nemizuzu eli-15) ngeveki yokusebenza ngamandla komzimba, okanye indibaniselwano elinganayo yokumodareyitha -Ukuba namandla omsebenzi we-aerobicizibonelelo zempilo ezifanelekileyo, kubandakanya ukunciphisa uxinzelelo lwegazi. Imibutho eliqela yezonyango icebisa ubuncinci imizuzu engama-30 yokuzivocavoca yonke imihla ukuba ibe luncedo kuxinzelelo lwegazi, ukunciphisa umzimba, ukulawula isifo seswekile kunye nempilo yentliziyo.
Kunye nokuzilolonga, ukutya kunokuba nefuthe kuxinzelelo lwegazi. Kwabo bajonge ukuthoba uxinzelelo lwegazi, uGqirha Chandra ucebisa ukuba DASH isicwangciso sokutya ,egxininisa ukutya okusekwe kwisodiyam ngokuthembela kukutya okutsha, kubandakanya imifuno, iziqhamo, ukutya okuziinkozo, inyama engenamafutha, ubisi olunamafutha asezantsi, iimbewu, kunye neenqoba
Kukho okunye ukutya ekufuneka ukwazile okunokuthi kube negalelo kuxinzelelo lwegazi. Ityiwa kunye nokulondolozwa okungekuko ekutyeni kunokukhuthaza uxinzelelo lwegazi oluphezulu ngokudlula kwi-endocrine kunye nokungasebenzi kakuhle kwesodium, kwaye utywala bunokuba negalelo kuxinzelelo lwegazi kwabanye abantu, utshilo uGqirha Chandra, ongeze athi, Ukutya okuchanekileyo kungawunciphisa umngcipheko Ukuphuhlisa uxinzelelo lwegazi kunye nokususa isidingo sonyango loxinzelelo lwegazi kwaye ubuncinci, ukunciphisa umngcipheko wokunyuka kunyango lwegazi.
Ukuzilolonga yenye yeendlela ezilungileyo zokugcina uxinzelelo lwegazi olusempilweni. Abo banesifo soxinzelelo lwegazi kufuneka babonane nogqirha wabo onokuthi abancede babakhokele kwindlela yokwenza umthambo eya kulungela iimfuno zabo.
UBernie Sanders usesibhedlele: Iinyani ezi-5 eziKhawulezayo ekufuneka uyazi
Ukutya kwe-Selfie: Iinyani ezi-5 eziKhawulezayo ekufuneka uyazi
ndingathatha ntoni ekhaya for uti
ude umntu asuleleke yinyumoniya
umkhuhlane ufukama ixesha elingakanani phambi kokuba ugule
zingaphi iintsuku onokulinda ngazo ukuba uthathe isicwangciso b
Ndisebenzise i-monistat 7 kwaye iyatsha
Ngaba zikho ngaphaya kwezixhobo zokuhlaziya izihlunu